मनोरञ्जन – Page 57 – Sagarmatha TV
समन सञ्जीवले मलेसियाबाटै ल्याए ‘संसार तिम्रै’
काठमाडौं । लमजुङ घर भइ वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा हाल मलेसियामा रहेका गायक, गीतकार तथा संगीतकार समन सञ्जीव तामाङले नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका छन् । विदेशमा रहेर पनि उनले नेपाली कला संस्कृति र गीतलाई माया गर्दै नयाँ गीत बजारमा ल्याएका हुन् । आफ्नै रचना तथा स्वर रहेको ‘संसार तिम्रै’ बोलको गीत युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको हो […]
मङ्लबार, साउन १, २०७५
सुटिङ सेटको पछाडि निलो अर्थात हरियाे पर्दा किन राखिन्छ ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रमा प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्न थालिएको छ । चलचित्र मात्रै होइन म्यूजिक भिडियोमा पनि प्राविधिक पक्ष अब्बल सावित हुँदै गएको पाइन्छ । नयाँ बन्ने हरेक चलचित्रको छायांकन देखि नै प्राधिक पक्षलाई ख्याल राख्दै काम अघि बढाइन्छ । सुटिङस्थलमा अगाडि कलाकारहरुले अभिनय गरिरहेका हुन्छन् । त्यसको पछाडि निलो अर्थात हरियो पर्दा […]
आइतवार, असार २४, २०७५
रोकियो रानीमहल, निकितालार्इ पहिलाे गासमै ढुंगा
काठमाडौं । शृंखला खतिवडाले मिस नेपालको ताज पहिरिनेवित्तिकै निकिता चाण्डकले अभिनय करिअर सुरु गरिन् । रानीमहबलबाट उनको यात्रा सुखद हुने अपेक्षा थियो । चलचित्रमा अनुबन्धित भएबापत लोभलाग्दो पारिश्रमिक पाईन । आधी रकम छायांकन अगावै लिएकी निकिताले बाँकी रकम छायांकन पश्चात दिने सहमति भएको थियो । दुर्भाग्य चलचित्र २० प्रतिशत छायाँकन पुरा नहुँदै फिल्म रोकिएको छ […]
‘सञ्जु’को चौतर्फी चर्चा
काठमाडौं । फिल्म ‘सञ्जु’को यतिखेर चौतर्फी चर्चा छ । फिल्मको व्यवसायिक र समिक्षात्मक पाटो राम्रो भएसँगै फिल्मको चर्चा चुलिएको हो । राजकुमारी हिरानी निर्देशित फिल्मबाट अभिनेता रणवीर कपुरको अभिनयको तारिफ भएको छ । यो फिल्म बलिउड अभिनेता संजय दत्तको जीवनीमाथि आधारित छ । संजयले पनि यो फिल्म हेरिसकेका छन् । उनले फिल्म हेरेपछि फिल्ममा जे […]
बिहिबार, असार २१, २०७५
उमेश र कविताको रियल प्रेम कहानी ‘बोबी’
टाेली देश दौडाहामा काठमाडौं । चलचित्रको प्रदर्शन मिति नजिकिएसँगै बोबी टोली देश दौडाहामा निस्किएको छ । देशव्यापी कन्सर्ट गर्ने जमर्कोसहित ‘बोबीः लाइभ कन्सर्ट– नेपाल टुर’ नामका साथ देश दौडाहामा निस्किएको टोलीले गत आइतबार पोखराबाट कन्सर्ट शुरु गरेको हो । कन्सर्ट २६ गते भक्तपुरमा पुगेर टुंगिनेछ । कन्सर्टमा चर्चित गायक राजेशपायल राई, टिभी सिरियल ‘भद्रगोल’ टिमबाट […]
शेयर लगानीकर्ताले घेरे ब्रोकर कम्पनी
काठमाडौं । सरकारको निर्णयविरुद्ध शेयरधनीहरु आन्दोलित भएका छन् । गत शुक्रबार सरकारले राइट शेयर र बोनस शेयर दुवैमा कर लगाउने निर्णय गरेसँगै शेयर लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । शेयर लगानीकर्ताले मंगलबार बिहान १० बजेपछि ब्रोकर कम्पनीमा घेराउ गर्दै सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएपछि शेयर कारोबार ठप्प भएको छ । शेयर लगानीकर्ताले सरकारी […]
बुधबार, जेष्ठ २३, २०७५
बागमतीमा सुरु भयो मतगणना
माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल मंसिर २३ दखि शुरु हुने
लुम्बिनी प्रदेशले जित्यो वाइ वाइ यू –१९ क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि, सुदूरपश्चिम प्रदेश १ सय १३ रनले पराजित
इन्डोनेसियाको पूर्वि जाभाको माउन्ट सेमेरुमा ज्वालामुखी विष्फोटमा परी १३ को मृत्यु, ९८ भन्दा बढि घाइते
थप २०५ जनामा कोरोना पुष्टि, १ जनाको मृत्यु
हिमानी शाहमाथि पनि खनिए कमल थापा
तीन महिनामै १० अर्बको चाँदी आयात
कोरोना संक्रमणबाट भारतमा थप ९० जनाको मृत्यु
सुनको मूल्य बढ्यो, तोलाको कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
तनहुँमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु
पूर्वसुरक्षाकर्मीमा राजनीतिक मोह
अलैँचीको मूल्य बढ्यो, मनको कति पुग्यो ?
रेखा थापालाई हराउँदै कुन्तीकुमारी शाही महामन्त्रीमा विजयी
मौसम पूर्वानुमानः पहाडी भूभागमा आंशिक बदली र बाँकी भू-भागमा सफा
कोरोना बीमाको भुक्तानीमा को जिम्मेवार ?
आज कक्षा १२ को नतिजा आउँदै
५८० वर्षपछि मंसिर ३ गते लाग्दै छ सबैभन्दा लामो चन्द्र ग्रहण
५८० वर्षपछि मंसिर ३ गते लाग्दै छ सबैभन्दा लामो चन्द्र ग्रहण, कतिबेर रहन्छ ?
अफगानिस्तान ‘पृथ्वीकै नर्क’ बन्दै
कांग्रेस गण्डकी प्रदेश महामन्त्रीमा इन्जिनियर कडेलको दाबी
ओलीले बनाए १८ पदाधिकारीको सूची, को-को नेतालाई गरियो समावेश ?
दैनिक हिँड्नुका १२ फाइदा
तालिबानले फेरि किन गर्‍यो अमेरिकी सेनाको हतियार प्रदर्शन ?
५ अर्ब ५३ करोड ठगीको जाहेरी
डीएसपी लोकनाथ तिमिल्सिनाको निधन
सर्बोच्च अदालतका ५ जनाबाहेक बाँकी १४ न्यायाधीशहरु काममा फर्कने
व्यक्तिगत आम्दानीमा कर : कति कमाउँदा कति तिर्नुपर्छ ?
यमनी अभिनेत्री इंतिसारलाई पाँच वर्षको जेल सजाय
घरजग्गाको मूल्यवृद्धिमा ह्रास
जापानमा बन्यो उड्ने बाइक, कति होला मुल्य ?